NRNA एक अभियान हो मेरो यात्रा निरन्तर, केही समय संघ र मातृभूमीका लागि :- रबिना थापा - Janapukar
सम्पूर्ण NRNA अभियन्ताहरुलाई नमस्कार !
गैर आवासीय नेपाली संघको ८ औं विश्व सम्मेलन तथा अधिवेशनमा भाग लिन र NRNA अमेरिकाको पछिल्लो कुरा नेपालीहरुको विश्व समुदाय समक्ष राख्न, संस्थाका गतिबिधिहरुमा सकृय भाग लिनको लागि जन्मभूमी लाग्दैछु।
मैले बिगत देखि नै उठाएका संस्थाको सिस्टम डेभलप गर्ने कुराहरुलाइ निरन्तर राख्ने छु। अमेरिकाको चुनाव, डेलिगेट्स छनोटमा भएको नाङ्गो नाँच लगायतका बिषयमा यस क्षेत्रका RC र DRC अनि अरु नेतृत्व तहमा कुरा गरिराखेकी छु र अझै गर्नेछु।
यस बाहेक संघका अरु गतिबिधिहरुमा अमेरिकाका लागि थप योगदान गर्न प्रयास गर्नेछु। मैले राख्ने कुराहरुको लिस्ट गरेकी छु। म एउटा व्यक्ति होइन एउटा ठूलो आवाज र वास्तविक सदस्यहरुको प्रतिनिधि हुँ भन्ने मलाइ लागेको छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नेछु। हालै सुन्नमा आएको थप तर हाँसो उठ्दो कुरा, डेलिगेट्समा वेटिङ्ग लिस्ट पठाइएको छ। त्यो लिस्टमा पुर्व लिस्टमा छुटेका श्रीमान् र श्रीमतीहरुको नाम थप्ने काम भएको छ। पुर्व अध्यक्ष सुमन तिमलसिना, प्रल्हाद के सी अनि पूर्व ICC महासचिव रतन झा जस्ता थुप्रै व्यक्तिलाइ अझै समेटिएको छैन।
यस बाहेक, IES मा अमेरिकी नेतृत्व पुर्याउन, अमेरिकाज क्षेत्रमा योग्य र संघको लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई जिताउन लवी गर्ने प्रयास रहने छ। बिधान संसोधन र NRNA Vision 2020 & Beyond जस्ता नयाँ कुराहरुमा थप सपोर्ट दिन मेरो हरतरहले प्रयास रहने छ।
पहिला यानेकी सुरुका दिनहरुमा अमेरिकामा पनि मेरो कुरालाई साथ समर्थन गर्नुहुन्थ्यो। चुनावमा ठूलो जमातले सहयोग गर्नुभयो। ऐले आएर सम्पूर्ण संचार र आम नेपाली अमेरिकन समुदायले समर्थन र साथ् दिनु भएको छ। यसका लागि तपाइहरु सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु !
रबिना थापाको Facebook बाट